နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: Movies Review
ရေးသားသူ Ko Boyz at 12:22 AM
khin oo may January 7, 2009 at 12:41 AM
ဒုတိယကားကို ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ ကြည့်ပြီးရင် ဒီဘက်ပို့လိုက်ပါလား။ သာမီးလေးကချောတယ်။ ရယ်ရမယ်ထင်လို့။
မူဗွီစဘွိုင်လာ (movie ..?)
Ko Boyz January 7, 2009 at 1:13 AM
- ကြည့်ချင်ရင် ပို့ပေးပါ့မယ်။
- movie spoiler - ဇာတ်လမ်းတွေ ကြိုကြိုပြောတော့ ရသ ငုပ်လွန်းလို့ အဲလို ပြောတတ်တဲ့သူတွေကို စဘွိုင်လာ တွေလို့ ခေါ်ကြတာ...။
- အိပ်ရာကနေ ရှုရှုးဖလားဝါးရင်း ကော်မန့် ဝင်တာတွေ့လို့ ပြန်တာ။ ဒီပို့စ်က ကြိုရေးထားတာ။ ကြိုက်တဲ့အချိန် တင်နိုင်အောင် စရေးကတည်းက အချိန်ကို ရွေးထားတာ။ အိပ်ပြီ...။ တာ့တာ
ThuHninSee January 7, 2009 at 2:48 AM
wildwildwind January 7, 2009 at 3:32 AM
mysouju မှာရှာတော့ ရှိဝူးတော့
မီယာ January 7, 2009 at 3:37 AM
ကြယ်ပွင့်တွေက ကိုဘပေးတာလား။ ရန်ကုန်မှာလည်း ကိုးရီးယားကားတွေ အများကြီးပဲ ရတယ်။
:P January 7, 2009 at 7:11 AM
ဒုတိယကားက အမေက သမီးထက်ပိုစွံနေပါရော့လား.....
khet myint myint January 7, 2009 at 10:39 AM
google reader မှတဆင့်ဝင်ရောက်ဖတ်သွားပါတယ်။ မှတ်မိသလောက်က
ksanchaung January 7, 2009 at 10:45 AM
ကြက်ခြေခတ်သုံးခု (အဲ။ ရှုပ်ကုန်ပြီ။) ကြယ်သုံးပွင့်ခွဲ ပေးထားတဲ့ကားကို ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ အသက်အရွယ်ရလာတော့ အသည်းကနုသွားပြီ။ လွမ်းမောစရာတွေဆို အရမ်းခံစားရတယ်။ သွေးသံရဲရဲ ပြူးတူးပြဲတဲတွေလား။ ဆောရီးပဲ။ မင်းသမီးချောချောနဲ့ ဟာသကားဆိုရင်တော့ ကြည့်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုရီးယားကားတွေက “စ”လုံးမှာ ရှာရခက်မယ်။
လောလောဆယ်တော့ Twilight ကို ၀တ္ထုဖတ်နေတယ်။ ရုပ်ရှင်ထက်တောင် ပိုကောင်းသေးဗျာ။ တခြားစီပဲ။
Ko Boyz January 7, 2009 at 2:05 PM
- တီသု။ ဟိုအမြွာကားကတည်းက စိတ်ကုန်သွားတာ။ အဲဒါနဲ့ ဂျပန်ဆို မုန်းသွားလိုက်တာ ဆူရှီတောင် မစားတော့ဘူး။
- wildwildwind ရေ (ဟမ်မလေး မောလိုက်ထာ။)မိုင်ဆိုဂျူးမှာ ကားဟောင်းတွေပဲ တင်သေးတယ်။ အခုက ကားသစ်တွေ။
- မီယာ။ ဟုတ်ကဲ့. ကြယ်ပွင့်တွေက ကျွန်တော့်ဘာသာ ကျွန်တော် ပေးထားတာပါ။ လွဲခဲပါတယ်။ (ထင်တာပဲ)
- ဆင်ဆင် - ကြည့်ချင်ရင် အိမ်လာယူလှည့်ပါ။ အမ်းမားကြည့်ပြီးမှ ပေးနိုင်မယ်...။ :P
- ကပ်ပတိန် ပြောတာ မှန်ပါတယ်။ ရိဒ်ဒါက ကြည့်ရတာ အဆင်ပြေပါသလား။ တစ်ချို့က သိပ်အဆင်မပြေဘူး ပြောလို့ပါ။
- ကိုကေ။ စလုံးမှာ ကိုရီးယား Addict သိပ်မဖြစ်ကြပါ။ ပြီးတော့ ပိုင်းရိတ်ခွေတွေ မရပါ။ အော်ခွေတွေ ဈေးနှုန်း မြင့်ပါတယ်။ ဟလုံးက အော်ခွေ ဝယ်မဲ့ အစား ရုဲံပဲ သွားကြည့်ပါမယ်။ ကိုးရီးယားအော်ခွေတွေ ရှားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မလေးရောက်ခိုက် သယ်လာတာပါ။ ခွေ ၂၀ ကျော် ၃၀ နီးပါး မကြည့်ရသေးပါဘူး။ သွေးသံရဲရဲတွ များမလား မသိဘူး..။ :D